Ogwe mmanya - Ngosiputa friji maka karama atọ n'enweghị nsogbu. Etu osisi Eke osisi / hpl 20 abụọ-glazing mm Laminate esịt panel. kwa karama H.328 D.98 mm - kwh / annum 60 ibu 25 n'arọ - (SF00) - Dafne Design
Home shop Ịgba Italian Ọkachamara mmanya Wine panel - Refrigerated ngosi maka ...
Home / shop / Ịgba Italian / Ọkachamara mmanya / Mmanya nke mmanya - Ngosiputa friji maka karama atọ n'usoro. Etu osisi Eke osisi / hpl 20 abụọ-glazing mm Laminate esịt panel. kwa karama H.328 D.98 mm - kwh / annum 60 ibu 25 n'arọ - (SF00)
Ogwe mmanya - Ngosiputa friji maka karama atọ n'enweghị nsogbu. Etu osisi Eke osisi / hpl 20 abụọ-glazing mm Laminate esịt panel. kwa karama H.328 D.98 mm - kwh / annum 60 ibu 25 n'arọ - (SF00)
okporoko: Ee-OLPM-ZOSP Category: Ọkachamara mmanya Product ID: 14887
Dafnedesign.com - Wine Framework - refrigerated ngosi maka atọ kwụ karama nke na-acha ọcha wine - pụrụ enịm ke ọ bụla gburugburu ebe obibi - ?? A ọhụrụ na pụrụ iche ikuku na agwa gị ka ị a n'ezie speciale.Il tost Wine Framework na-enye ohere ị na-echekwa na-eje ozi dị iche iche mmanya na okpomọkụ kwesịrị ekwesị. A na-enweta refrigeration na osisi thermoelectric na-adịghị ahụ ọkụ nke na-ejigide ngwa ngwa. Obere omimi kachasị na-enye ohere ka awụnye ya ọbụna obere oghere. The Quadro Wine nwere a osisi ebe obibi na friji na-enweghị-emetọ gas na e wuru na recyclable ihe. Mgbanwe nke ihe ndị ahụ dị mfe ma na-eme ka ọ dịrị mgbe niile iji rụzie ngwaahịa ahụ. Metal Ọdịdị aluminum ụzọ etiti na osisi etiti / hpl Vetrocamera 20 mm Ne Panel magnetik gasket laminate Ikanam ọkụ usoro thermoelectric Automatic defrost ventilated na friji mgbochi vibration usoro - maka karama H 328 98 n'obosara mm - ọcha ikanam ìhè